यस्तो आयो २० राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको प्रगति :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
यस्तो आयो २० राष्ट्रिय गौरवका आयोजनको प्रगति
अर्थ संसार, काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ८०.७९ र वित्तीय प्रगति ७३.७४ प्रतिशत छ । यसैगरी बबई सिँचाइ आयोेजनाको भौतिक ४६.४१ र वित्तीय ४३.३६ प्रतिशत प्रगति छ । रानीजमरा कूलरीया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक ८२.७३ र वित्तीय ५१.२७ प्रतिशत प्रगति छ ।
यसैगरी भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको भौतिक १०० र वित्तीय ९८.६५ प्रतिशत प्रगति छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक ७१.५६ र वित्तीय ९७.०२ प्रतिशत प्रगति छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक ९१.५० र वित्तीय ९१.५१ प्रतिशत प्रगति छ ।
आयोगले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक ९६ र वित्तीय ९१ प्रतिशत प्रगति भएको जनाएको छ । आयोगका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक १०० र वित्तीय ६९ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक ९० र वित्तीय ९३.१८ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भौतिक ८३.७ र वित्तीय ५४.५२ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको आयोगले जनाएको छ । लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको भौतिक १०० र वित्तीय ९९.९९ प्रतिशत प्रगति छ । पुष्पलाल ९मध्यपहाडी० लोकमार्गको भौतिक ९७.४ र वित्तीय पनि ९७.४ प्रतिशत नै प्रगति छ ।
रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको भौतिक ७७.६७ र वित्तीय ७१ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हुलाकी लोकमार्गको भौतिक १०० र वित्तीय प्रगति ९७.४ प्रतिशत छ । उत्तर दक्षिण (कोशी) लोकमार्गको भौतिक १०० र वित्तीय प्रगति ८७.३९ प्रतिशत छ ।
उत्तर दक्षिण (कालीगण्डकी) लोकमार्गको भौतिक १०० र वित्तीय प्रगति ९२.४ प्रतिशत छ । उत्तर दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गको भौतिक १०० र वित्तीय पनि १०० नै उपलब्धि छ । काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्गको भौतिक १०० र वित्तीय ९६.४३ प्रतिशत प्रगति छ ।
आयोगका अनुसार काकाकुल राजधानीको तिर्खा मेट्न उपयोगी मानिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक ७४.७४ र वित्तीय प्रगति ४१.३८ प्रतिशत छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको भौतिक ९५.०७ र वित्तीय प्रगति ९१.१४ प्रतिशत विवरण प्राप्त भएको योजना अधिकृत सोना श्रेष्ठले सुनाउनुभयो ।
बधाई छ ! प्रयास नेपाल धादिङको अध्यक्षमा रेष्टन कडेल
डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाली रियालिटी शोमा भायानेट सह–प्रायोजक
जिवित जन्मेकाे बच्चा प्रसुती गृहले फ्याँक्याे, राेइरहेकाे देखेपछि ८ घण्टापछि बल्ल उपचार (भिडियाेसहित)
१ सहकारीको ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता
२ नेप्सेमा २ कम्पनीको शेयर सूचिकृत, कुनको कति कित्ता ?
३ अब खाद्य सामग्री अनलाइनबाट किनमेल गर्दा खल्ती वालेटबाटै भुक्तानी गर्न सकिने !
४ बुधबार देशभर ११ सय ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा कति थपिए ?
५ हिमालयन डिष्टिलरीका पूर्व सञ्चालक परे धितोपत्र बोर्डको कारबाहीमा !
६ शेयर बजारमा करेक्शन : बढेको बजारमा १ अर्ब ७० करोड
७ एनएमबि हाईब्रिड फण्ड एल–१ को खुद सम्पत्ति मूल्य बढ्यो
८ एनसेलले आजैबाट लागु हुनेगरी ल्यायो यस्तो अफर, कसरी सुचारु गर्ने ? हेर्नुहोस्
९ एनआरएन लघुवित्तले तोक्यो बुकक्लोज मिति
१० प्रभु बैंकको “सहयात्रा समृद्दिको” कर्जा योजना शुभारम्भ